भेडाको उनजस्तो..... एउटा कथाको खोजीमा ......: 2009
Posted by Reality Bites, Nepal at 7:20 PM7comments:
Posted by Reality Bites, Nepal at 3:34 AM4comments:
लाङ्टाङको तयारीमा मित ज्यु !
धेरै पछी मितको ईमेल आयो कि अब २-३ दिन लाङटाङ नगई भएन , आन्तरीक पर्यटक हुनु पर्‍यो भनेर ! ओहो यो नेपाल हाम्रै त हो नि , जहाँ जतिखेर घुमे पनि फ्री ! तराई बन्दले गर्दा पनि आन्तरीक पर्यटकको लर्को अब हिमाल तिर हिडने त होइन ?
५ दिनमा ५ हजार खर्च गरेर हिमाल हेर्न पाइने यो सस्तो लामटाङ रुट छ भन्ने थाहा पाउनु भो भने बिदेशी भन्दा नेपाली पर्यटक नै बढी हुन के बेर ?
Posted by Reality Bites, Nepal at 11:58 PM3comments:
ग्लेसिएर पग्लिदै !
लाङ्टाङ खोलाको मुहान यो हिमताल सुक्यो भने चाँही पक्कै पनि ग्लोबल वार्मिङको असर पर्‍यो भन्ने नै होला । समुद्र नभएपनी भएको त्यही खोला नाला र कुलेखानीहरु धेरै सुके भने फेरी उही त हो नि लोड्सेडिङ शत प्रतिशत नै । २०० औ ब्लग पोस्ट पढनु भएकोमा धन्यवाद !
Posted by Reality Bites, Nepal at 2:01 AM6comments:
फर्कदै लाङ्टाङतिर !
लाङ्टाङ पुग्नु अघी यात्रामा भेटिने साना नानीहरुको आँखाले पनि हामी कती पिछडिएका छौ भन्ने बोध गराईरहेको हुन्छ । हिमाल जस्तो अबोध र चन्चल अनी स्वच्छ मन शायद यिनै बालकहरुको नै होला । लाङ्टाङ खोलाको सुशेलिमा हिमाल जाने सिजन मार्च अप्रिल सुरु हुने प्रतिक्षामा कतै बिदेशीको लस्करमा कतै तपाईं पनि त हुनुहुन्न ?
Posted by Reality Bites, Nepal at 2:24 AM 1 comment: